कोरोना भाइरस : प्रभावकारी उपचारको खोजी
२०७६ चैत २० बिहीबार १४:५५:०० प्रकाशित
डा राकेश घिमिरे
अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिइरहेको छ कोरोना भाइरस (कोभिड १९)। यसको बढ्दो महामारी नियन्त्रण र बिरामीको उपचार गर्न हामीसँग भने केही विशेष उपकरण बाहेक यस विरूद्ध काम गर्ने औषधि पत्ता लागेको छैन। र, पत्ता लगाउन विभिन्न अनुसन्धान भइरहेका छन्।
क्वारेन्टाइन, अलगाव र संक्रमण नियन्त्रण अनि जो बिरामी पर्नुहुन्छ, उहाँहरुको सपोर्टिभ केयर नै कोभिड १९ बाट बच्नु र संक्रमण फैलिन नदिनु अहिलको अवस्था हो। बिरामीको उपचारका लागि विश्वसामु अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो एन्टिभाइरल औषधिको अवश्यकता छ, जसले भाइरल लोड घटाएर रोग नफैलाउन मद्दत गरोस्।
प्रकोपको केन्द्रविन्दु मानिने चीनको वुहानमा कोभिड १९ का १९९ बिरामीमा Lopinavir- ritonavir (400mg and 100mg respectively) को बारे गरेको अध्ययनले अत्यधिक प्रभावकारी देखाएन र त्यसैगरी फ्रान्समा थोरै बिरामीमा गरेको hydroxychloroquine (600mg) र azithromycin औषधिको उपयोगिताबारे अनुसन्धानले भाइरल लोडमा उल्लेखनीय कमी देखाएको छ।
Hydroxychloroquine र azithromycin को प्रयोगबाट QT interval बढ्ने जसको प्रभावले Arrhythmic मृत्यु हुने जोखिमको बारेमा चिन्ता र यसको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने बहस चलिरहेको छ। यसको प्रभावकारिता समर्थन गर्न अझै धेरै कोभिड १९ का बिरामीमा अनुसन्धान अवश्यक देखिन्छ।
सार्स विरुद्ध खोप द्रूत रुपमा विकास गर्न अवश्यक देखिन्छ। यसो भन्दाभन्दै खोप विकास एक लामो, महँगो प्रक्रिया हो र वर्तमान अवस्थामा खोप विकासको लागि विभिन्न अध्ययनहरु भइरहेका छन्।
भनिन्छ, उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु उत्तम हो। त्यसैले यी कुराहरुलाई पालना गर्नु भयो भने तपाइँलाई रोगबाट बच्न धेरै सहयोग गर्छः
हात बारम्बार धुने
नियमित रुपमा र राम्ररी आफ्ना हात सेनिटाइजर वा साबुन पानीले धुने किन? तपाइँको हातमा भएका भाइरसहरु लाई हटाउन
सामाजिक दूरी राख्ने
कम्तीमा १ मिटर (३ फिट) दूरी आफू र जोसुकै खोकिरहेको व्यक्तिको बीचमा राख्ने किन? खोकिरहेको व्यक्तिको मुखबाट साना तरल ड्रपलेटहरु स्प्रे गर्दछ, जसमा कोभिड १९ भाइरस हुन सक्छ।
आँखा, नाक र मुखमा हातले सकेसम्म नछुने
किन? हातले धेरै सतहहरुलाई छुन्छ र भाइरस लिन सक्छ। त्यहाँबाट तपाइँको शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ र बिरामी बनाउन सक्छ।
खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा मुख र नाक लाई कुहिनो वा टिसयुले छोप्ने र त्यसपछि आफूले प्रयोग गरेको टिस्युलाई तुरुन्त डिस्पोजल गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने किन? मुखबाट निस्केका साना तरल ड्रपलेटहरुले भाइरस फैलाउँछ।
यदि तपाइँलाई ज्वरो, खोकी र सास फेर्न गाह्रो भयो भने तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोला।
अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यो रोग विरुद्ध काम गर्ने औषधि पत्ता नलागिसकेको हुनाले सुरक्षित भएर घरमा बस्नु नै यो रोगबाट आफू पनि बच्नु र अरुलाई पनि बचाउनु हो।
(डा घिमिरे त्रिवि शिक्षण अस्पताल क्लिनिकल फर्माकोलोजिस्टका उपप्राद्यापक हुन्)